Asean has to do more in Myanmar - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Sep 26 2017 06:27 AM
While the action planned on the crisis by Asean is welcome, it's rather late and it's certainly too little. The violence in Myanmar's Rakhine state since late last month last left hundreds dead and nearly halfamillion displaced.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ အရေးခင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး အာဆီယံရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုကို ကြိုဆိုသော်လည်း တကယ်တော့ အာဆီယံရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေက နောက်ကျနေပြီးနည်းလည်းနည်းပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုက ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းက လူရာနှင့်ချီပြီးသေဆုံးစေခဲ့ပြီး လူသန်းတ၀က်လောက်ကို ထိခိုက်စေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
နယူးယောက်မှာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေ အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Also tagged with one or more of these keywords: ASEAN, Myanmar